Acer, Excel Myanmar to Bring Cashless Fares to Yangon Bus System - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Jan 12 2018 01:58 AM
tender Yangon Bus
A total of 14 companies tendered bids and three of them — AnyPay Payment Services, Asia Stamar Transport Intelligent, and Excel KC Myanmar — were selected as finalists earlier this month. The board named Excel KC Myanmar the winner on Wednesday.
သတ်မှတ်ထားသော ရက်ထက် တလနောက်ကျပြီးတဲ့အခါမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ဘတ်စ်ကားစီးနင်းသူပြည်သူများအတွက် ကတ်စနစ်ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် အဖွဲ့မှာ Excel KC Myanmar ဖြစ်တယ်လို့ ကြေငြာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စုစုပေါင်း ၁၄ ဖွဲ့ တင်ဒါဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး AnyPay Payment Services, Asia Stamar Transport Intelligent, and Excel KC Myanmar တို့ က ဖိုင်နယ်လစ်များအဖြစ် ဒီလအစောပိုင်းမှာ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗုဒဟူးနေ့မှာမှ Excel KC Myanmar အားအောင်နိုင်သူအဖြစ်ကြေငြာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Also tagged with one or more of these keywords: tender, Yangon, Bus